DEG .. DEG Hay'adda Amnesty oo Abdirashed Janan ku eedeysay dambiyo Culus – Bandhiga
DEG .. DEG Hay'adda Amnesty oo Abdirashed Janan ku eedeysay dambiyo Culus
Hay’adda Xuquuqda Aadanaha ee Amnesty International ayaa qoraal ay soo saartay ugu dalbatay dawladda Kenya inay qabato Wasiirka Amniga ee Jubbland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, isla markaana ay u gacan geliso dawladda Soomaaliya, si maxkamad loo saaro.
War-saxaafadeed ay soo saartay, ayaa hay’adda Amnesty International ay ku sheegtay in Cabdirashiid Janan loo qabtay “dambiyo cuslus” 31-kii August ee sannadkii hore loona baahan yahay in caddaaladda la marsiiyo.
Amnesty International ayaa intaas ku dartay in ay ilo xog ogaal ah ka heshay warka ku saabsan in Janan uu ku sugan yahay magaalada Nairobi ee caasimadda u ah daka Kenya.
Seif Magango, oo ah agaasime ku xigeenka Amnesty International ee Bariga iyo Geeska Afrika ayaa yiri: “Wax la aqbali karo ma aha in Cabdirashiid Janan, oo lagu tuhunsan yahay inuu mas’uul ka yahay dambiyo xadgudub ku ah shuruucda caalamiga ah iyo kuwo ka dhan ah bani’aadamnimada, uu isku dayo inuu ka baxsado caddaaladda”.
Amnesty waxa ay ugu baaqday dawladda Kenya inay qabato, si degdeg ahna ugu gacan geliso dawladda Soomaaliya, waxayna ugu baaqday dawladda Soomaaliya inay maxkamadayntiisa ka dhigto mid waafaqsan sharciyada caalamiga ah, iyadoo aan dib loo ridin.
“Baxsashada Cabdirashiid Janan waxay dhibanayaasha dambiyadiisa la tuhunsan yahay, oo ay ku jiraan dilal shacab, iyo is-hortaaga gargaar ka dhigeysa kuwa ka shakinaya inay weligood caddaalad heli doonaan. Maadaama hadda la ogyahay halka uu joogo, mas’uuliyiinta Kenya iyo Somalia waa inay ka shaqeeyaan in dib loo qabto, si caddaaladda iyo isla-xisaabtanka loogu fuliyo,” waxaa sidaas yiri agaasime ku-xigeenka Amnesty ee Bariga iyo Geeska Afrika, Seif Magango.
“Maamulka Jubaland, oo uu ku jiro madaxweyne Axmed Maxamed Islam, oo si soo noq-noqosho leh ugu baaqay in Cabdirashiid laga sii daayo xabsiga, waa inay joojiyaan inay gabbaad uga noqdaan inuu wajaho cadaaladda marka lasoo celiyo,” ayuu yiri.
Ma cadda go’aanka dowladda Kenya ka qaadan doonto codsiga hay’adda Amnesty International, ayada oo Nairobi ay xulufo la tahay maamulka Axmed Madoobe ee uu Janan ka tirsan yahay, kaasi oo ay xifaaltamaan dowladda Soomaaliya